‘महामहिम ! विकसित मुलुकका नेपालीको चिन्ता नगरी बक्स्योस्’ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
‘महामहिम ! विकसित मुलुकका नेपालीको चिन्ता नगरी बक्स्योस्’
प्रकाशित मिति : २०७६, १९ चैत्र बुधबार १५:५७
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीका बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेकी छन् । बुधबधार ट्वीट गर्दै सांसद झाँक्रीले नेपालभित्रै हजारौं नेपाली अलपत्र परेको अवस्थामा अमेरिका, युरोप, जापान, अष्ट्रेलियालगाय देशमा रहेका नेपालीका चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताएकी हुन् । उनले बरु विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका कामदारको उद्दारका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई टेलिफोन गरी नेपालीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएरको खबर सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई व्यंग्य गरेका हुन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘महामहिम ! अमेरिका,क्यानडा,युरोप,अष्टेलिया, जापान,कोरिया लगायत विकसित मूलुकका नेपालीको चिन्ता नगरी बक्स्योस् । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा निर्माणको काम गर्न गएका मजदूरहरू लकडाउनमा अलपत्र परेकाहरू समस्यामा छन।ब्यस्थापनको लागि स्थानिय तहलाई निर्देशन दिने की ?’